Shan meelood meel ka mid ah dadka isticmaala ayaa ku qarash gareeya in ka badan 400 oo euro mobilada | Androidsis
2018 hadda waa dhammaatay sidaa darteed shirkado badan ayaa bilaabay inay daabacaan falanqeyntooda sanadka. Mid ka mid ah ayaa ah Counterpoint Research, oo nooga tagaya xogta suuqa taleefannada. Gaar ahaan, iyaguna way naga tagayaan leh tirooyin ku saabsan dhaqanka isticmaalaha. Sida loo ogaado qadarka lacagta ay ku bixiyaan mobilka. Waxyaabaha ku habboon sanadka gudihiisa oo ah dhamaadka-sare iyo qiimaha dhexdhexaadka ah ee ugu sarreeya ee Android aad ayey muhiim u ahaayeen.
In kasta oo ay jiraan dhinacyo muhiim ah. Sida xaqiiqda ah in iibka intiisa badan qeyb ka sarreysa 600 euro ay iska leeyihiin shirkadda Apple. Laakiin waxaan aragnaa in isticmaaleyaashu ay lacag aad iyo aad u badan ku isticmaalayaan taleefanka gacanta. Inkasta oo boqolkiiba inyar ay bixiyaan in kabadan 400 oo euro qalab.
Sida laga soo xigtay daraasaddan Counterpoint, kaliya 19% dadka isticmaala ayaa ku bixiya wax ka badan 400 euro si ay ugu iibsadaan taleefanka gacanta. Tani waxay ka dhigan tahay in mid ka mid ah shantii isticmaaleba, ficil ahaan, ay ku bixiso qaddarkan markii aad iibsaneysid taleefannada casriga ah. Isticmaalayaasha badankood waxay kujiraan qiimo kala duwan kan tan.
Counterpoint waxay xogta ka qaadatay rubuc saddexaad ee sanadkii hore. Waad ku mahadsan tahay iyaga, waa la arki karaa in qaybta lacagta (ee 400 euro ama ka badan) kaliya waxay u taagan tahay 22% suuqa adduunka. Marka ma gaarayo rubuc ka mid ah suuqan mobilada. In kasta oo horumarka baaxadda leh aan ku aragnay dhammaadka-dhammaadka Android, oo leh xulashooyin badan oo laga kala dooran karo.
1 Huawei iyo Apple waxay ku taagan yihiin qaybta qiimaha
2 Apple ayaa ku badan mobilada in ka badan 600 euro
Huawei iyo Apple waxay ku taagan yihiin qaybta qiimaha
Warbixintan ay shirkaddu soo bandhigtay, waxay muujineysaa jiritaanka shirkadda Huawei ee qeybta mobiilka ee ugu sarreeya. Nooca Shiinaha ayaa soo maray 2018 guulo buuxa, iyadoo rikoodh lagu daray telefoonada loo soo diray adduunka. Waxay mar hore isku muujiyeen inay yihiin soo saaraha labaad ee ugu weyn adduunka ee suuqa casriga. Sidoo kale qaybtan oo ah in kabadan 400 oo euro waxay ku yeesheen koboc muhiim ah iibka.
Waxay heleen 12% iibka taleefannada oo leh qiime ka sarreeya 400 euro. Xaqiiqdii, soo saaraha Shiinaha wuxuu ku guuleystey inuu labalaabo iibkiisa marka loo barbar dhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Qeyb ahaan maahan wax layaab leh, maxaa yeelay noocyada dhammaadka dhamaadka sumadda ayaa si xoog leh ugu booday xagga tayada. Waxayna ku qancisay malaayiin isticmaaleyaasha suuqa oo dhan.
In kasta oo qaybtani ka mid tahay taleefannada gacanta ee mudnaanta leh haddana waa Apple oo shaki la'aan xukuma. Shirkadda Mareykanka ayaa leh 47% iibka taleefannadan oo qiimahoodu ka sarreeyo 400 euro. Tani waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad kalabar dhammaan taleefannada qiimahan, ama qaybtaan, ay ka tirsan yihiin Apple. Jaantusyada caddeeya meesha ay ku xooggan tahay qeybta.
Samsung ayaa weli ku jirta kaalinta labaad iyadoo leh 22%. Dhamaadka dhamaadka calaamada Kuuriya ayaa hoos udhacay iibka sanadka 2018. Ma aheyn sanad wanaagsan, taas oo dadka isticmaala ay u arkeen la'aanta hal-abuurnimo qeybtan shirkadda Kuuriya. In kasta oo hal-abuurnimo cusub na sugayso 2019, isagoo wata taleefankiisa flip ee dusha sare.
OPPO iyo Xiaomi sidoo kale waxay sameeyaan muuqaal liiskan, oo leh iib ah 5 iyo 3%, siday u kala horreeyaan. Inta soo hartay ee soo saarayaasha waxay wadaagaan 11% iibka haray. Laga soo bilaabo waxa aan ku aragno in qaybtan suuqyada ah, iibku si aad ah ugu urursan yahay noocyo dhawr ah.
Apple ayaa ku badan mobilada in ka badan 600 euro
Haddii aan kor ugu kacno hal tallaabo oo dheeri ah, qaybta mobilada oo ka badan 600 euro, Apple ayaa mar kale xukuma. Xaqiiqdu waxay tahay in markii taleefannada casriga ahi ay kordhaan, waxaan aragnaa in moodooyin badan oo shirkad Mareykan ah la iibiyay. Qaybta mobilada ee in kabadan 600 euro waxay ku xisaabtamaan 61% iibka.
Lambarkan waxay kordhisaa inbadan mobilada in kabadan 800 oo euro. Tan iyo markii ay xaaladdan tahay, Apple waxay xisaabisaa 79% iibkeeda. Marka way cadahay in Android-da sare ee dhamaadka leh ay wado dheer u socoto hadii ay rabaan inay la tartamaan shirkada Mareykanka qaybta suuqaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » 19% dadka isticmaala waxay ku qarashgareeyaan in ka badan 400 euro mobilada